Matshi 2, 2022 Eze uThadayo
Nazi inani lezifundo zonyango eCanada zabafundi bamanye amazwe esibajonga njengezona zibalaseleyo phakathi kwezinye ezikhoyo ngonyaka.
Inzululwazi yezoNyango ngokubanzi yintsimi ebaluleke kakhulu yokufunda kodwa ibiza kakhulu, imali yokufunda yokufunda amayeza okanye izifundo ezinxulumene nayo ayisekho eluphahleni, kunjalo nje abantu abaninzi bafuna ukwenza intsimi nokuba banakho na ukubanakho kwezemali okanye akunjalo.
Kulungile kuwe ukuba uyakwazi ukuxhasa ngemali imfundo yakho kwicandelo lezonyango. Kulabo abangakwaziyo, kodwa bephilile kwizifundo, kukho izifundo zonyango eCanada onokuthi ufake isicelo kwaye sidwelise malunga ne-11 yabo esiyithatha njengeyona ibalaseleyo phakathi kwabanye.
Into entle, ezi nkxaso-mali ziyafumaneka qho ngonyaka, ukuba uyayiphosa le yalo nyaka, ujonge unyaka olandelayo.
Eli nqaku libonelela ngolwazi olupheleleyo ngezona ndawo zibalaseleyo zokufunda ezonyango eCanada zabafundi bamanye amazwe, ewe ewe, kunjalo, unokubaluleka kwicandelo lezonyango ngezibonelelo zokufunda eCanada zibekwe njengenye yeendawo ezilungileyo zokufunda emhlabeni.
Ukuba ufuna ukuya kwisidanga samayeza kunye nesidanga sotyando, ungahamba ngesi sikhokelo Ungakufumana njani ukungena kwe-MBBS eCanada.
Kutheni ufundisisa amayeza eCanada?
Ungasifaka kanjani isicelo seSayensi yoNyango eCanada yaBafundi beZizwe ngeZizwe
Ezona zifundo ziBalaseleyo zezoNyango eCanada zaBafundi beZizwe ngeZizwe 2020
I-AB WISWELL SCHOLARSHIP (I-DALHOUSIE UNIVERSITY)
I-AJ DOUGLAS SCHOLARSHIP KWEZEMPILO YOLUNTU NE-EPIDEMIOLOGY (IYUNIVESITHI YAMAKHOSIKAZI)
UGqr. F. LLOYD ROBERTS SCHOLARSHIP (IYUNIVESITHI YASE ALBERTA)
IINKCUKACHA ZESIKHUMBUZO SE-ADIEL STEACY (ISIQINISEKISO SENKOSI)
I-AE BOWIE SCHOLARSHIP KWEZONYANGO (UNIVERSITY OF ALBERTA)
I-ALAN TARSHIS KUNYE NANCY I-SCHOLARSHIP ENGCONO KWI-MEDICINE (I-DALHOUSIE UNIVERSITY)
U-ALBERT A. IBHUTLELA IBHASO KWI-OTHOPEDICS (IMCGILL UNIVERSITY)
ICollege ye-MEDICINE GRADUATE SCHOLARSHIP (IYUNIVESITHI YASASKATCHEWAN)
I-DOUGLAS NO-JEAN BAILEY SCHOLARSHIP (IYUNIVESITHI YASEBRITISH COLUMBIA)
UGqr. UDONALD NOCHRISTINA JOLLY SCHOLARSHIP KWEZONYANGO (UNIVERSITY OF ALBERTA)
I-ALEX PEEPRE ISIKHUMBUZO SEENKQUBO (IYUNIVESITHI YOKUQHUBA)
Okokuqala, iCanada yindawo enomdla ngokwenene ukuba ifundwe ngenxa yesimbo sayo esingathandekiyo kunye nezizathu zayo zokhuseleko njengoko ilizwe liyenye yeendawo ezisemhlabeni ezinelona zinga liphantsi lolwaphulo-mthetho.
Esinye isizathu esifanelekileyo sokufunda amayeza kunye nezifundo zonyango eCanada, iiyunivesithi zelizwe ezibonelela ngamayeza kunye nezifundo ezinxulumene noko zinemigangatho esemgangathweni, yokuhlaziywa kophando kunye nezixhobo ezifuna abafundi bezonyango ukuba bafunde ngcono kwaye nesatifikethi sakho siya kwamkelwa naphina Umhlaba.
Phambi kokuba ndibhale eli nqaku, ndenze uphando olufanelekileyo nolubanzi kwaye ndakwazi ukuza nezifundo zonyango eCanada zabafundi bamanye amazwe kwaye ayisiyiyo eyamazwe akhethiweyo kuphela, esi sicelo sokufunda sivulelekile kubo bonke abafundi kulo lonke world ngaphandle kokuchazwe ngenye indlela kuyo nayiphi na kuzo.
Ngaphambi kokuba uqale ukonwaba malunga nomxholo ophambili, kufuneka ndibuze;
Ngaba uyazi ukuba ungasifaka kanjani isicelo sokufunda eCanada njengomfundi wamanye amazwe? Okanye mhlawumbi awazi ukuba kukho amaxwebhu ayimfuneko ekufuneka ubenawo kunye neenkqubo ekufuneka uzilandele ukuqinisekisa ukuba isicelo sakho sokufunda siya kuba yimpumelelo.
Makhe ndiyicacise ngokukhawuleza ngaphambi kokuba nditshone ngesihloko esiphambili.
Ukufumana la maxwebhu alandelayo; i-visa yabafundi okanye imvume yokufunda, i-ID esemthethweni enjengePasipoti, ingxelo yenjongo, ileta yesindululo, i-CV okanye ukuqhubeka kwakhona, iziphumo zovavanyo lobuchule bolwimi (TOEFL, SAT, GRE okanye GMAT), iidiploma, izidanga, imibhalo ebhaliweyo okanye isatifikethi esivela kwisikolo sakho sangaphambili .
Khetha iyunivesithi oyikhethileyo kwaye uqalise ukwenza uphando kunye nokunxibelelana ngokubhekisele kubufundi okanye ufake isicelo solunye uxhaso lwangaphandle emva kokuba ungenisiwe kwikhosi.
Khetha ikhosi yezonyango oyikhethileyo kwaye emva koko uqalise isicelo esifanelekileyo esinokwenziwa kwi-Intanethi okanye ngaphandle kweintanethi
Qalisa isicelo sakho ngexesha ukuze ube namathuba aphezulu okufakwa kwesicelo sakho ngokukhawuleza.
La maxwebhu kunye neenkqubo zesicelo ziyahluka ukusuka eyunivesithi ukuya eyunivesithi ke kubalulekile ukuba unxibelelane ngokuthe ngqo neziko lakho olithandayo ukufumana isikhokelo ngakumbi okanye ufunde iphepha labo lokufunda.
Apha ngezantsi kukho uluhlu lwe I-11 yezifundo zonyango eCanada ezikhoyo ukufumana izicelo ezivela kubafundi bamanye amazwe minyaka le. Ezi zithuba zokufunda ngonyango zithathwa njengeyona mfundo ibalaseleyo yokufunda yabafundi bamanye amazwe abafuna ukufunda izifundo eziphantsi kwecandelo lezonyango eCanada.
Sidwelise ezi nkxaso-mali ecaleni kwezikolo apho zifumaneka khona.
B.Wiswell Scholarship (iYunivesithi yaseDalhousie)
J Douglas Scholarship kwiMpilo yoLuntu kunye ne-Epidemiology (iYunivesithi yaseKumkanikazi)
I-Adiel Steacy Memorial Scholarship (iYunivesithi yaseKumkanikazi)
I-AE Bowie Scholarship kwezonyango (iYunivesithi yase-Alberta)
UAlan Tarshis kunye noNancy Goodman Scholarship kwiMedical (iYunivesithi yaseDalhousie)
UAlbert A. Butler Award kwi-Orthopedics (iYunivesithi yaseMcGill)
Ikholeji yoNyango lweziDanga (iYunivesithi yaseSaskatchewan)
UDouglas noJean Bailey Scholarship (iYunivesithi yaseBritish Columbia)
UDonald noChristina Jolly Scholarship kwiMedical (iYunivesithi yase-Alberta)
UAlex Peeper Memorial Scholarship (iYunivesithi yaseGuelph)
Esi sisibonelelo sezonyango eCanada sabafundi bamanye amazwe abaxhaswe ngu-AB Wiswell. Kuvulelekile kubafundi bamanye amazwe abafuna ukufunda amayeza.
Abafundi abamkelweyo baya kufunda amayeza okanye nayiphi na enye ikhosi yezonyango enxulumene neyunivesithi yaseDalhousie, ubuchule beyeza.
Inkxaso mali yokufunda ayimiselwanga yiyunivesithi kodwa yi U-Wiswell uxhaswe ngumntu wesithathu wangaphandle.
Le ngxowa-mali ixhaswe nguwe UAJ Douglas kunye noFrances Douglas ukulungiselela abafundi bamanye amazwe ukuba bafundele impilo yoluntu kunye nezifo kwiYunivesithi yaseKumkanikazi, kwiFakhalthi yeSayensi yezeMpilo kwaye kuvulelekile kubafundi abavela kwihlabathi liphela ukuba bafake izicelo.
Kukho inani leemali zokufunda eyunivesithi ezibandakanya abafundi abaya kwizifundo nakwezonyango.
The Inkqubo yokufunda iRoberts Kuvulelekile kubo bonke abafundi bamanye amazwe ukuba benze isicelo kwiDyunivesithi yaseAlberta ukuba bafunde amayeza kwiyunivesithi yamayeza kunye nonyango lwamazinyo.
Kwakwelo phepha linye, kukwakho inani lezinye izifundi zonyango eCanada zabafundi bamanye amazwe kunye nabasekhaya.
Eyona khrayitheriya iphambili malunga nazo zonke izifundi ezikhoyo kwiYunivesithi yaseAlberta iphepha lokufunda ngezonyango liphezulu okanye ubuncinci, ngaphezulu komndilili wokusebenza.
Abafundi abavela kuzo zonke iinxalenye zehlabathi banelungelo lokufaka isicelo sale nkqubo yokufunda ukuze bafunde amayeza kunye nezifundo ezinxulumene noko kwiYunivesithi yaseKumkanikazi.
Inkqubo yokufunda yeBuyie unikezelwa kwiYunivesithi yaseAlberta kwaye abafundi abavela kwihlabathi lonke banelungelo lokufaka isicelo sokufunda iyeza de baphumelele.
le Inkqubo yokufunda yamanye amazwe Unikezelwa nguAlan Tarshis noNancy Goodman babafundi bamanye amazwe (wonke umntu ufanelekile) ukuba afunde amayeza kwiDyunivesithi yaseDalhousie.
IYunivesithi yaseMcGill ibonelela ngezifundo zokufunda kubafundi bamanye amazwe abavela kwihlabathi liphela ukuba bafunde ngeOthopedics simahla.
le I-Orthopedics yezifundo zamanye amazwe ixhaswe nguAlberta Butler kwaye ifumaneka kuphela kwiYunivesithi yaseMcGill.
IYunivesithi yaseSaskatchewan ibonelela ngale nto uphumelele isidanga kwicandelo lonyango ukulungiselela abafundi bamanye amazwe nabasekhaya kwaye ukufaneleka kuvulelekile kubafundi abavela kwihlabathi liphela.
Le nkcazo inikezelwa kwiYunivesithi yaseBritish Columbia kwaye ixhaswe nguDouglas noJean Bailey ukulungiselela abafundi bamanye amazwe ukuba bafunde amayeza eCanada.
Esi sesinye isibonelelo semali yokufunda esibonelelwa yiDyunivesithi yase-Alberta kwaye ixhaswe ngu UGqr Donald noChristina Jolly ukulungiselela abafundi bamanye amazwe ukuba bafunde amayeza eCanada.
The Isibonelelo semali yokufunda iAlex Peepre yeyabafundi bamanye amazwe ukuba bafunde amayeza kwiYunivesithi yaseGuelph kwaye ivulelekile kuzo zonke izizwe.
Kuya kufuneka uyazi ukuba zininzi izibonelelo zonyango kunye nezifundo zokufunda eCanada zabafundi bamanye amazwe kodwa eli nqaku likulethela eyona ilungileyo ungakhetha kuyo.
Iiyunivesithi zaseCanada zineendawo eziphambili zophando lwezonyango kwaye ikharityhulamu yokufundisa yenye yezona zinto zibalaseleyo emhlabeni. Ezi yunivesithi ziya kukwenza ube ngugqirha olungileyo kulo naliphi na icandelo lezonyango ogqiba ekubeni ubaluleke kulo kwaye isatifikethi sakho kunye noqeqesho luya kwamkelwa kwihlabathi liphela.
Ngelixa ndikunike esi sikhokelo kwizifundo zonyango eCanada zabafundi bamanye amazwe, andinakukwazi xa naliphi na kula mathuba okufunda lingayeka ukubakho njengoko onke engamathuba okufundela umntu wesithathu kwaye enganikwanga ngqo ziiyunivesithi kodwa amaqabane abo.
Iinkqubo zasimahla zeSidanga se-Intanethi
Ulwabiwo-mali lukaRhulumente ngokupheleleyo
Amazwe angadingi IELTS yeMisebenzi
Isifundo soLawulo lweProjekthi esimahla kwi-Intanethi
Izifundo zonyango kubafundi baseCanadaIzifundo zonyango eCanada zabafundi baseCanadaIzifundo zonyango eCanada zabafundi bamanye amazwe
Post Previous:Iikhosi ze-22 zasimahla kwi-Intanethi ezineZatifikethi e-UK
Okulandelayo Post:I-17 yasimahla ye-CPD ekwi-Intanethi yaBafundi
Pingback: Isicelo seUniAcco Fly High Scholarship Application 2022
Pingback: Izikolo eziphambili ze-100 zangaphambi kokufumana imirhumo yazo ngoku i-2021
U-Anika Ashraf uthi:
Agasti 18, 2021 kwi-7: 57 am
Yeyiphi eyunivesithi ebonelela ngezifundo ezihlawulwa ngokupheleleyo eCanada ukuba ndithatha i-neurosurgery njengeyona iphambili?
Ibtism Gul uthi:
Agasti 7, 2020 kwi-8: 42 am
Ngaba bayabuza amanqaku eklasi ye-12?
kwaye ndingena njani kwezi nkxaso-mali?
U-Israel Lawson uthi:
Juni 17, 2020 kwi-10: 33
Ndingalifumana njani eli thuba lokufunda?